Rụkọta ọrụ na njirimara mmekorita na ngwa Apple | Esi m mac
Na mmechi nke ikpeazu na Septemba, Apple jiri ohere iji gosipụta ya Njirimara mmekorita mgbe anyị na-eji ngwa ụlọ ọrụ Apple. Anyị na-ekwu maka ngwa ahụ Peeji, Onu ogugu, na Isi Okwu. Ọ bụghị ihe ndabara na e gosipụtara nhọrọ ahụ na Septemba, ebe nke a dara na obodo agụmakwụkwọ, na-enye onye ọrụ ohere ime mgbanwe na dọkụmentị ma gosipụta ya n'otu ntabi anya nke ndị ọrụ na-esonye na mmekota ahụ.
Mana ọ bụghị naanị na ọ metụtara na agụmakwụkwọ. Na azụmaahịa ọ dịka ọ dị ire ma ọ bụ m ga-anwa anwa ịsị na ọ nwere ngwa karịa ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Nọghị n’otu ìgwè abụọ a? Ọfọn, na njikwa ụlọ, nhọrọ a nwekwara ụzọ. Anyị anwalewo ya ma anyị nyere gị nkọwa.
Na nkuzi dị mkpirikpi ị ga-ahụ screenshots nke Ọnụ Ọgụgụ, mana ọrụ ahụ bụ otu na ngwa abụọ ndị ọzọ. Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịmekọrịta site na macOS, iOS ma ọ bụ iCloud.com, ya mere, ị nwere ike ịrụ ọrụ site na PC.
Nke mbụ, anyị ga-ele anya maka Button rụkọta ọrụ. Ọ dị na ogwe bọtịnụ. Buru n'uche na atụmatụ ahụ adịbeghị kemgbe, wee melite ma ọ bụrụ na ịnweghị. Must ga-ahụrịrị eserese ahụ bụ mmadụ nwere akara nwere ikike karịa.
Site na ịpị bọtịnụ ahụ, ọ na-akọwa ọrụ ahụ. Anyi agwala gi ihe o bu. Tinye tinye dị Beta na-adọ, ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Mgbe inabata anyi aghaghi iGosipụta otu anyị ga-esi kpọọ ndị ọrụ nkwado. Nhọrọ ndị dịnụ bụ: email, iMessage, AirDrop, Netwọk mmekọrịta ma ọ bụ detuo njikọ ahụ. Anyị ga-egosikwa ma ị nwere ike nweta onye ọrụ ọbịa ma ọ bụ onye ọ bụla nwere njikọ ahụ. N'otu oge ahụ, Anyị ga-egosi ma ọ bụrụ na onye ọrụ nwere ike ịgụ ma ọ bụ gbanwee akwụkwọ ahụ.
Ma olee otu ọrụ nkwado? Ọfọn, ihe dị ịtụnanya. Anyị nwere ike ịhụ ebe ndị ọrụ ahụ nọ na dọkụmentị ahụ, nwere akara ngosi agba akọwapụtara nke ọma, yana mgbanwe ndị emere gosipụtara ndị ọrụ ndị ọzọ na opekempe otu ma ọ bụ abụọ.
Dị ka oge niile, anyị nwere ike ịlele n'oge ọ bụla nke ndị ọrụ nwere akwụkwọ dị maka ndụmọdụ ma ọ bụ mgbanwe, nke mere na njikwa zuru oke.
Ọ bụ ezie na e nwere akụkụ ndị a ga-agbagha, ọ bụ nnukwu nzọụkwụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Ozi obula di nkpa, anyi gha ekwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Na-arụ ọrụ dị ka otu ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ na ngwa Apple